လက်ရေး တယ်ညံ သကိုး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » လက်ရေး တယ်ညံ သကိုး…
လက်ရေး တယ်ညံ သကိုး…
Posted by ဆူး on Nov 4, 2010 in Short Story |9comments
ဆူး စိတ်ကူး လက်ရေး တယ်ညံ သကိုး
ရွာတရွာမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကပ္ပိယကြီး တယောက် ရှိတယ်.. သူကို ဘယ်သူမှ စကားနဲ့ကော ကဗျာ စာ အလင်္ကာဖွဲ့တဲ့ နေရာမှာ မမှီနိုင်ကြဘူး။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဟာတွေ ဆိုလည်း အမှားမျိုးစုံ ရှာထောက်တတ်လို့.. တရွာလုံးက လူတွေ အမြင်ကတ်ကြတယ်။ ခံရတာများတော့ ရွာသားများ စုပေါင်းအကြံထုတ်ကြသည်.. ဒီ ကပ္ပိယကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ.. နောက်တော့ အကြံတခု ရသွားပါသည်။ ဒီလိုနဲ့.. ကဗျာ တခုကို ရေးပြီး ကပ္ပိယကြီးကို သွားပြသည်။ ကပ္ပိယကြီး ကဗျာကို ဖတ်ပြီး အချိန် တခုကြာအောင် နဲနဲ စဉ်းစားနေသည်.. ရွာသားများကတော့.. သူတို့ အောင်နိုင်တော့မည်ဟု တွေးပြီး ၀မ်းသာနေကြသည်။
နောက်တော့ ကပ္ပိယကြီး သေချာ စဉ်းစားပြီး ပြောလိုက်ပါသည်.. ကဗျာလေးကတော့ ကောင်းတယ်.. လက်ရေးက တယ်ညံသကိုး..
အမှန်တော့ ရွာသားများက သူတို့ ရေးသမျှ ပြောသမျှ ဘာလုပ်လုပ်.. တခုမဟုတ် တခု ဝေဖန်ပြီး အကြောင်းပြချက်ပေးကာ နိမ့်ချပြောဆိုသည့် အတွက်.. နှစ်ပေါင်းများစွာက ကပ္ပိယကြီး ရေးသော ကဗျာကို တိတ်တိတ်လေး ခိုးယူပြီး.. တခြား စာရွက်နဲ့ ကူးပြရင် ကဗျာကို ဘယ်လိုပြောမလဲ သိချင်လို့ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှားကို မရရအောင် ရှာထုတ်နိုင်တဲ့ ကပ္ပိယကြီးကြောင့် ရွာသားများ.. လာလမ်းအတိုင်းသာ မအီမသာနဲ့ ပြန်ခဲ့ ရပါတော့တယ်။
အပျော် သဘော အပျင်းပြေ ဖတ်ဖို့ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဘူးတဲ့ အ သုံး လုံး ပုံပြင်စာအုပ်ထဲမှ ပုံပြင် တခုကို သတိတရ ချရေးလိုက်ပါသည်။ ပုံပြင် ရေးတဲ့ သူဆီက မူပိုင်ခွင့်တော့ ယူထားဘူး.. ဘယ်သူရေးမှန်းလည်း မသိတော့ဘူး.. စာအုပ်ကလည်း မရှိတော့ဘူး.. စာအုပ်ထဲက ဖတ်ထားတာ အလွတ်ချရေးလိုက်တာပါ။
(ပုံပြင် ရေးတဲ့ သူဆီက မူပိုင်ခွင့်တော့ ယူထားဘူး)
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ဆိုတာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိပါရဲ့ လားခင်ဗျား
ရွာပြင်က မိုက်ခဲ ထော်လာဂျီ အောင်ပု ဆိုတာ ကိုတော့ ကြားဘူးတယ်.. ဘာကြီးလဲ ဟင်..
ဟို…………….. ဟို.. ဟာ ကြီးများလား ဟင်…. သိစေချင်ရင် ပြောပေါ့..
ကိုမိုက်ကယ် ခင်ဗျားကို အငှားချထားပေးတဲ့ နာမယ်နဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို နောက်နှစ်အတွက် စာချုပ်အသစ်ပြန်ချုပ် ဖို့ရက်စေ့နေပြီဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
လောကမှာ ကိုယ်ရေးတာကို ပြန်မမှတ်မိလို့ လက်ရေးညံ့တယ်ထင်တာတွေအများကြီူးပါ။
မြေးတို. .. ဘ ပေထုပ်ကလေးပြန်ပေးကြပါဦး ဘလည်းမှတ်စရာလေးတွေရှိလို. ဟီဟိ။
ဒါကတော့ လူ့သဘာဝ ဖြစ်တတ်တာ ဆိုတော့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ အမြဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒါဆို ၁၉၉၃ကထဲကစဆွဲခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အန်အယ်လ်ဒီတံဆိပ်ကပ်ပြီး တပ်ချုပ်ကြီးကို သွားလက်မှတ်ထိုးခိုင်းရင် မမှတ်မိတော့လို့ ဆွဲဆုတ်ပစ်မလားမသိ။ လက်ရေးညံ့ညံ့အစား မှင်မှိန်မှိန် စာလုံးတွေနဲ့ပေါ့။
ပေါင်းသတ်ပုံတွေတော်တော်မှားနေတာတွေ အမြဲတမ်းတွေ့ နေရတယ်။
မှားရင် ထောက်ပြပါ.. အမှတ်မမဲ့ သော်လည်းကောင်း အမှန်မသိ လို့သော် လည်းကောင်း မှားနိုင်တဲ့ အတွက်.. ကူညီပါ.. ကျေးဇူးတင်ပါသည်။